“Unai Emery waa macalin cajiib ah, sababtoo ah waxaan u ciyaareynaa si ka duwan sidii hore” – Granit Xhaka – Gool FM
“Unai Emery waa macalin cajiib ah, sababtoo ah waxaan u ciyaareynaa si ka duwan sidii hore” – Granit Xhaka
Dajiye November 18, 2018
(Arsenal) 18 Nof 2018. Macalinka reer Spain Unai Emery ayaa amaan xoogan ka helay laacibka khadka dhexe ee kooxda Arsenal iyo xulka qaranka Switzerland ee Granit Xhaka.
Wrgeyska “Metro” ee dalka England ayaa soo xigtay wareysi uu dhawaan kaga hadlay Granit Xhaka 47 jirka haatan hogaamiya kooxda reer London ee Gunners.
“Waa xilli ciyaareedka ugu fiican aniga iyo ciyaartoy badan, waxaan u ciyaareynaa qaabab kala duwan ee cajiib ah, waxaan qabaa inaan ku gudi jirno, waqtigii ugu fiicnaa ee xirfadeena kubada cagta”.
“Wuxuu ahaa go’aan cajiib ah inaan qandaraaska u kordhiyo kooxda Arsenal kahor koobka aduunka ee dalka Russia, si aan halkan u sii joogo ilaa iyo sanada 2023”.
“Tani waa qadarin weyn ee dhanka kooxda ah, sababtoo ah waxay doonayeen inaan sii joogo kooxda, si aan heshiis cusub u saxiixo kahor koobka aduunka, taasoo micnaheedu ahaa inaan qeyb ka ahay qorshaha macalinka cusub”.
“Waa xilli ciyaareedkeygii ugu fiicnaa Arsenal, iyo guud ahaan kooxda oo dhan, waxaan ciyaareynaa kubada cagta ee aad u fiican, sababtoo ah tababaraha wuxuu leeyahay sameyn xoogan, waana mid khibrad badan”.
“Wuxuu falaqeeyaa ciyaarta kahor iyo kadib kulan kasta ee aan ciyaarno, waa nooc nagu cusub laakiin waa cajiib”.
EEG: Safafka Rasmiga ah ee England vs Croatia